DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Somaliya aan la kala gooyn karin, ‘‘Gobol ka tirsan Soomaaliya cid aqoonsaneyso ma jirto‘‘ – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo marti ku ahaa dood cilmiyeed uu soo agaasimay Machadka Raas ee Falanqeynta Siyaasadda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa dadkii kaa soo qeyb galay ay waydiyeen su’aalo kala duwan oo u badnaa xaaladda uu dalku marayo.
Su’aalaha la waydiiyay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa arin la xiriirtay Midnimada Soomaaliya iyo dib-u-heshiisiinta bulshada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in mar walba uu ka shaqeeyo wadajirka umadda Soomaaliyeed, maadama sida uu hadalka u dhigay aaney bulshada Soomaaliyed kala maarmin.
“Dib u heshiisiinta Soomaaliya khaasatan Soomaaliya iyo Somaliland anigu intii aan joogay si aad ah ayaan uga shaqeyay inta hadda wada joogta in ay wada joogaan iyo in aan raadino Somaliland walaalaheen si midnimadeenii iyo wadajirkeenii u soo celino” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Wuxuu intaasi raaciyay madaxweynaha oo hadalkiisa sii, in Soomaaliya iyo Somaliland aaney kala go’i doonin, isla markaana waxyaabaha loo sheegayo dadka shacabka ah wakhtiga looga luminayo.
“Waxaan aaminsanahay in ay tahay muqadas, maxaa yeelay Soomaaliya lama kala gooynayo cid aqoonsaneysa gobal ka tirsan Soomaaliyana ma jirto, laakin dhalinyarada iyo shacabka ayaa wakhtiga laga luminayaa, waxey maraysaa maanta 30 Sano Somaliland madaxdooduna wax walba way sameyeen meel walbana waa u galeen sidey ku heli lahaayen aqoonsi” ayuu yiri Farmaajo.
Madaxwenaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wax laga waydiiyay, matalaadda gobolka Banaadir iyo arrinta dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax).
Balse arrinta Qalbi-dhagax iyo in uu liiska argagixisada ka saarayo Ururka ONLF ma uusan ka jawabin labadaasi su’aalood.
Madaxweyne Farmaajo mar wax laga waydiiyay inuu Musharrax yahay doorashada Soo socota ee Soomaaliya, ayuu ku jawaabay in waqtiga ku habboon uu ka hadli doono arrintaasi.
Haddaba halka hoose ka dhageyso Codka iyo Jawaabaha Madaxweyne Farmaajo:
Tags: dhiibistii, Doorashada, Farmaajo oo su'aalo la waydiiyay, Qalbiga dhagax, Somaliland, Ururka ONLF
Taliska Ciidanka Xoogga oo beeniyay in ciidamada DF Somaliya ay isaga baxeen deeganka Goofgaduud Buurey